KOMBUYUUTAR "TITAN": DIB U EEGIS, SHARAXAAD KA BIXIN TILMAAMAHA IYO TILMAAMAHA ISTICMAALKA - KUFSI
Beeraleydu waxay lahaanayaan beer yar yar, si taxadar leh u soo dhawow xulashada hibo-baraha ee digaagga taranka.
Isla markaa, fiiro gaar ah ayaa la siiyaa nidaamka kontoroolka, hawo-gelinta, awoodda iyo xuduudaha kale ee muhiimka ah ee qalabka.
Hoos waxaan ka wada hadleynaa casriga casriga ah ee loogu talagalay isticmaalka guriga "Titan".
"Titan" waa qalab caalami ah oo loo isticmaalo sidii loo ukeen lahaa ukunta iyo taranka dhalashada shimbirta beeraha ee uu soo saaray shirkadda Ruushka Volgaselmash.
Qeybta tooska ah ee qalabka waxaa laga sameeyey Germany, oo ay ku jiraan qaybaha ugu tayo sare leh iyo ilaalinta marxaladaha kala duwan. Qalabka waxaa lagu qalabeeyaa albaab leh dhalo hufan.
Titanium wuxuu leeyahay sifooyinka soo socda:
miisaanka - 80 kg;
dhererka - 1160 cm, qoto dheer - 920 cm, ballac - 855 cm;
wax soo saarka - guddi sanduuq;
isticmaalka tamarta - 0,2 kW;
Bixinta 220V ee caanaha.
Baro sida loo doorto kiniin ahaan ukumaha, sida loo saxo doorbididda aqalka qoyska, iyo sidoo kale baraarujinta faa'iidooyinka iyo faa'iido-darrada ku-soo-boodhka sida "Blitz", "Layer", "Cinderella", "Hib u fiican".
Qalabka wuxuu hayaa 770 ukun digaag ah, oo 500 ka mid ah 10 duubo oo loo yaqaano 'incubation' iyo 270 xajmiga hoose ee 4 baakidh. Tirada ukunku way kala duwanaan kartaa ama hoos udhaca iyadoo ku xiran cabbirka, lagu daray ama ka yar 10-20 gogo '.
"Titan" ayaa si buuxda u shaqeynaya, gudigeeda shaqeed waxay ku jirtaa dareemo aad adigu dejin kartid qoyaanka iyo heerkulka lagama maarmaanka ah, kaas oo si joogto ah loo ilaalin doono.
dhinaca midig ee muuqaalka elektarooniga ah wuxuu muujinayaa heerkulka qaybaha sare iyo hoose ee sanduuqa, iyo bidixda waxay tilmaamaysaa heerka qoyaanka;
Isbedelka xaddiga heerkulka waxaa lagu sameeyaa gacanta iyadoo la isticmaalayo badhanka kontoroolka oo leh saxsanaanta 0.1 darajo;
Tilmaamayaasha LED ee qoyaanka, heerkulka, hawo-gelinta, iyo digniinaha waxay ku yaalaan kor u-qaadista qalabka elektaroonigga ah;
dareenka qoyaanka dijitaalka ah waa mid xasaasi ah oo sax ah - ilaa 0.0001%;
naqshaduhu waxay ku shaqeeyaan nidaam qaylo-dhaan ah haddii ay dhacdo nidaam xumo;
qalabku wuxuu ka shaqeeyaa shabakada, waxaa lagu sifeeyay heerka A + adigoo adeegsanaya tayada tamarta;
Nidaamka dabaysha waa mid si otomaati ah oo hawada u qaybiya heerarka qalabka.
Waa muhiim! Kahor bilawga kowaad ee kuleylaha, waa lagama maarmaan in la hubiyo, haddii ay lagama maarmaan noqoto, isku hagaajinta mikroswitches ee xakameynaya bedelashada saxanka. Waxa laga yaabaa in la furo inta lagu jiro gaadiidka, taas oo sababi karta in gawaarida ay soo rogaan oo ay lumiyaan ukumaha.
Shaki la'aan, qalabkan waxaa loo tixgeliyaa calaamad muujinaysa saaxiibbadiis, iyada oo ay ugu wacan tahay faa'iidooyinka:
Qaybo tayo sare leh oo Jarmal ah oo sameeyey tijaabooyin badan;
guryaha laga sameeyey maaddooyin ka hortagaya abuurista miraha;
albaab hufan, taas oo suurtogal u ah in la xakameeyo geeddi-socodka iyada oo aan la furin marxaladda oo dhan;
dayactir si toos ah loogu sameeyo barnaamijka la siiyo iyada oo aan loo baahnayn ilaalin joogto ah;
qeylo-dhaanta waqtigaan ah ee xaalad degdeg ah;
Kombuyuutar "Titan": video
Marka laga soo tago dhinacyada wanaagsan, qalabku wuxuu leeyahay faa'iido daro:
maaddaama qaybo ka mid ah lagu sameeyo Jarmalka, haddii ay dhacdo burbur ama cillad, beddelku wuxuu noqon karaa mid dhibaato ah waxayna qaadan doonaan waqti dheer;
markaad dabacsan tahay xakamaynta saxaarada, qalabku wuxuu u rogi karaa baayacmushtarro leh ukun cayilan;
kakanaanta nadiifinta. Waxaa jira meelo adag oo la gaari karo qalabka, taas oo ay adagtahay in laga saaro wasakh iyo qolof inta lagu nadiifinayo.
Waa muhiim! Kuleylaha waxaa loo baahan yahay in la nadiifiyo oo la nadiifiyo, tan iyo inta lagu hayo jawi diiran oo qoyan, bakteeriyada khatarta ah ayaa laga yaabaa inay ku dhex muuqato qalabka waxyeellada ukunta.
"Titans" waa wax aan ka duwaneyn kuwa kale ee isweydaarsiga, kana shaqeynaya waa mid sahlan.
Marka, ka dib markaad ka qaadato qalabka aad u baahan tahay si aad ugu diyaariso shaqada.
Waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo helitaanka dhammaan qaybaha, xaaladdooda sharafeed iyo xaalada wanaagsan.
Si loo dhiso masrax ku yaala dusha sare ee wareegsan.
Ku shub biyo diirran tuumbada qoyaanka iyo nuujiyaha qiyaasta qoyaanka.
Isticmaal siriinjo, saliida saliidda ama saliidda shiidanka ku qaado mootada (2 ml) iyo gaaska loo yaqaan RD-09 (10 ml).
Daar qalabka ku jira shabakada, halka qaybta kuleylka leh fan ku xiran yahay, taas oo lagu muujinayo LED-ka ku habboon.
U oggolow in kuleylaha kululeeyo ilaa heerkulku xasilan yahay, ka dibna u daa ilaa 4 saacadood.
Isku xir kabka xaggan shabakadda.
Ka dib markaad hubiso wax ku oolnimada cutubka, waxaad sii wadi kartaa shaqada ugu weyn: diyaarinta iyo saarista ukunta. Ukuntu lama dhaqi karo ka hor intaan la dhigin.
Saaree saxarada kabuubyada ee ku xeeldheer meel xagal leh oo xagal ah 40-45 digrii, ukumo dhigo si ay si adag ugu dhajiyaan midba midka kale. Digaag, duur iyo turki ukumo ah ayaa hoos u dhigaya hoos u dhac, goose goose.
Fahamka u dhexeeya ukunta waxaa la geliyaa xaashiyo si marka marka saxda ah loo fiiqo, ukumuhu ma guurto.
Ku rakib tuubooyinka hagaha gudaha qalabka, hubi inay si ammaan ah u go'aaminayaan.
Albaabka u xir oo fur jilbaha.
Ma taqaanaa? Ukuntu waxay ku neefsan kartaa qolka. Inta lagu jiro koriinka digaaga, celcelis ahaan - 21 maalmood, hal ukun wuxuu ku jiraa qiyaastii 4 litir oo ogsijiin ah, wuxuuna sii deynayaa illaa 3 litir oo kaarboon dioxide.
Hannaanka qaboojinta, qalabku waa inuu si joogto ah u ilaaliyaa heerkulka la rabo iyo qoyaanka.
heerkulka waxaa lagu hayaa si toos ah heerka qiimaha celceliska qiyaasta + 37.5 ... + 37.38 centigrade;
qoyaanka inta lagu jiro muddada kabuubka ayaa lagu qiyaasaa 48-52%, halka taangiga waa in uu had iyo jeer noqdaa biyo;
19 cisho ka dib, gawaarida waxaa loo wareejiyaa si gebi ahaanba u jeeda, ukunta waa in la eegaa, ka dibna ukumaha bacrimiyay ee soo haray ayaa lagu dhejiyaa saxarada.
Baro naftaada barafka, boodhka, turki, guinkaa guinea, turkey iyo ukumaha duurjoogta.
Ka soo bixitaanka chicks waxay ka dhacdaa nooc kasta oo shimbir ah mudo cayiman:
digaagga ayaa ku dhasha 20 maalmood ka dib - on 21st,
ducklings iyo poults turkey - on 27th,
berriga - maalinta 30aad ka dib markii lagu dhejiyo masraxa.
Calaamadaha ugu horreeya ee xeeldheer ayaa soo muuqda 2 maalmood ka hor bilowga bilawga munaasibka, inta lagu jiro mudadaas waxaa lagama maarmaan ah in la kordhiyo heerka qoyaanka ilaa 60-65%. Ka dib marka la qabsado iyo xulashada chicks, qalabku waa inuu ka baxaa shabakada oo la nadiifiyaa oo la nadiifiyaa.
Ma taqaanaa? Marka la eego aragtida beeralayda, heerkulka cimiladu wuxuu saameeyaa saamiga jinsiga ee xayawaanka: haddii heerkulka kuleylaha uu ku jiro xadka sare ee caadiga ah, ka dibna dahaar badan ayaa muuqda, iyo kan hoose wuxuu jiraa digaag.
Qeybta ayaa lagu daray qiimaha celceliska qiimaha, qiimaha ay tahay celcelis ahaan $ 750 (qiyaastii 50-52 kun oo gaas, ama 20-22 kun oo hryvnia).
Waxaad sidoo kale xiiseyneysaa inaad ogaatid sida loo sameeyo kuleyliye qaboojiye jir ah.
Markaad dooratid xariirka, waxaa aad u faa'iido badan inaad ku tiirsato waayo-aragnimada xirfadleyda iyo jawaab-celintooda:
"Titan" waa mid aad u jecel beeralayda sababtoo ah nidaamsanaanta iyo nidaamka xakamaynta ah;
Faa'idada dheeraadka ah waa joogitaanka, marka lagu daro tufaaxa wax lagu qoro, dambiilaha hatcher;
inta badan dadka isticmaala waxay doorteen doorashadooda "Titan" sababtoo ah waxay ku qalabaysan tahay qaybo Jarmal oo la isku halleyn karo iyo qalabaynta;
naqshaduhu waa ujeeddo qoys oo ay fududahay in la xakameeyo oo lagu rakibo goobaha, ku haboon nooc kasta oo digaag ah;
Beeraley badan oo bilawga u ah isticmaalka qalabkan ayaa la kulmay dhibaatada xasilooni la'aanta saxarada, laakiin ma aha mid la xidhiidha soosaarka warshadaha waxaana lagu baabi'inayaa habka saxda ah ee hagaha hagaha.
"Titan" ma aha qalabka kaliya ee leh howlaha isku midka ah, waxaa jira kuwo kale: tusaale ahaan, "Vityaz", "Charlie", "Phoenix", "Optima", oo ay soo saartey isla shirkad. Moodooyinkaasi waxay isku mid yihiin sifooyinka guud iyo shaqooyinka, waxay ku kala duwan yihiin tirada ukunta la dejiyey, iyo sidoo kale muuqaalada hababka barnaamijka.
Sidaas awgeed, tixgelinta sifooyinka "Titan" wuxuu noo ogolaanayaa inaanu ku soo gabagabeyno in qalabkani uu u fiicanyahay isticmaalka gudaha, waa mid la isku hallayn karo oo sahlan in la isticmaalo, sidaa daraadeed waxay ku habboon tahay xitaa beeralayda cusub.
500 ukumo ayaa soo gashaa, oo lagu daraa 10-15 ukumo, oo ku xiran ukunta, 10 rodol oo ah isugeyn. Plus 270-320 ukumo digaag ah oo loogu talagalay afarta afargees oo hoose ee hatcher ah.
Dhibaato ayaan soo orday shalay. Waxaa loo rogay masraxa, iyo taageeraha oo si tartiib tartiib ah u wareegay, hal wareeg oo daqiiqo ah. Mishiinka oo furay. Dareemada warshad, quudhsan! Dhammaan wax kasta oo ay wax ku foorarsadaan, nadiifin, waxay isticmaaleen mishiinka cusub (Litol +120 gr). Dhaqdhaqaaqa ayaa si caadi ah ugu soo laabtay.